Nagu Saabsan - Shirkadda Boselan Tank Company Limited
(aluminium aluminium) birta wejiga leh ee wejiga ka samaysan ee birta leh. Qalabkaan waxaa si guul leh loogu dabaqay biyaha cabitaanka, wasakhda warshadaha, wasakhda xoolaha iyo bullaacadaha magaalada, daaweynta qashin-qubka, leachate-qashin-qubka iyo beero kale, waxaana iskaashi la sameeyay mashruuca si loo dhammeeyo USB, IC, UASB, CSTR iyo halbeega kale ee qodista iyo dheefshiidka, dhammaystir buuxa ayaa ah qaab dhismeedka qaran iyo ku soo degista suuqa caalamiga ah.
1. GFS Tank: Saxanka birta ee la iibsaday waa la feerayaa, waa la leexleeyaa, waa la toogtay, waa la buufiyaa oo waa la demiyaa.
2. Mashiinka gaaska xuubka leh ee labanlaab ah: dharka la soo iibsaday ee loo yaqaan 'PVC-Coated Coar' waxaa loo jaray cabirka looga baahan yahay soosaarka iyadoo la gooynayo, ka dibna labada lakab ee dharka iskuxiran ee pvc ay kuxiran yihiin mashiinka xaraashka kuleylka.
1. Qaybta qabyada ah ee heerarka warshadaha, kaalinta saddexaad ee warshadaha;
2. Shirkadaha farsamada sare ee gobolka hebei;
4. Warbixinta tijaabada ee heerka qiimeynta nabadgelyada nadaafadda ee qalabka guriga iyo cabitaanka biyaha iyo agabyada ka hortagga dhalooyinka ku urursan;
5. Shahaadada deynta AAA;
Shahaadada 6.AAA ee lagu maamuusayo qandaraasyada iyo dhawrista ballanqaadyada;
7. Heerka sameynta heerka nabadgelyada ee heerka-3 shirkad (mashiin);
8. Aqoonsiga halista iyo baaritaanka qarsoon iyo maaraynta dhibaatada.